MONTHLY NEWSLETTER JANUARY, 2020
161 views 2020-02-05
၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလအတွက် သတင်းလွှာရယူဖို့ အချိန်ကျရောက်လို့လာပါပြီ။ အားလုံးကို ပျော်ရွှင်စရာ နှစ်သစ်တစ်နှစ် ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဦးစွာနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။ နှစ်သစ်ဟာ ကြည်နူးခြင်း၊ ကြွယ်ဝခြင်းနှင့် ပျော်ရွှင်ခြင်းတို့ကို အားလုံးအတွက် သယ်ဆောင်လာပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်မှာတော့ အားလုံးဟာ ပိတ်ရက်တွေကနေ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာကြပြီဖြစ်ပြီး နှစ်သစ်တစ်နှစ်ကို လန်းဆန်းတက်ကြွစွာ ပြန်လည်စတင်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေကြပါပြီ...
လစဉ်လတိုင်း ကွန်ရက်အဖွဲ့ဝင်များ၊ ကွန်ရက်၏ အသိမိတ်ဆွေများ သို့မဟုတ် ဝန်ထမ်းများအား ၄င်းတို့၏ GEN နှင့် ပတ်သက်သော အတွေ့အကြုုံ စကားလက်ဆောင်များ ပါဝင်မျှဝေပေးပါရန် ဖိတ်ခေါ်လေ့ရှိပါတယ်။ ယခုလ လစဉ်သတင်းလွှာမှာတော့ တက်ကြွတဲ့ TRP တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပြီး ပဲ့ကိုင်ကော်မတီဝင်တစ်ဦးလည်းဖြစ်တဲ့ မကျော့ကျော့ခိုင်ရဲ့ GEN နှင့် ပတ်သတ်သည့် အတွေ့အကြုံများနဲ့ ရင်တွင်းစကားများကို မျှဝေထားပါတယ်။
နှစ်သစ်သက္ကရာဇ် ၂၀၂၀ မှာ အားလုံးပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပြီး လုပ်ငန်းဆောင်တာများ အောင်မြင်ပြီးမြောက်အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ကြပါစေကြောင်း ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။
ကျွန်မတို့ရဲ့ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်ဟာဆိုရင် အဖွဲ့ဝင်တွေ၊ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ စုစည်းအင်အားတွေနဲ့အတူ ၂၀၀၈ ခုနှစ် မေလမှစတင်ခဲ့ပြီး တန်းတူညီမျှမှု၊ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမရှိမှု၊ အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်မှုဆိုတဲ့ စံတန်ဖိုးထားမှုများနှင့်အတူ လက်တွဲလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်မှာ ၂၀၂၀ ခုနှစ်ဆိုရင် ၁၂ နှစ်တာကာလကို ရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါပြီရှင်။ ကျွန်မတို့အားလုံးရဲ့ မျှော်မှန်းချက်တွေကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ကဏ္ဍတိုင်း၊ အလွှာတိုင်းမှာ ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှမှုရှိဖို့ လူ့အခွင့်အရေးကို လေးစားလိုက်နာအကာအကွယ်ပေးဖို့နဲ့ လူ့အခွင့်အရေးအပြည့်အဝရရှိဖို့ ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
ကွန်ရက်တစ်ခုတည်ထောင်ချိန်မှစတင်လို့ အခက်အခဲတွေ၊ စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ များစွာကြုံခဲ့ရပါတယ်။ သို့သော်လည်းပဲ အားလုံးရဲ့ အင်အားများ စုစည်းမှုနှင့်အတူ ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးအတွက် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ယန္တရားတွေ ဖြစ်ပေါ်လာစေဖို့၊ စွမ်းရည်ပြည့်ဝပြီး ယုံကြည်မှုမြင့်မားတဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ တက်ကြွတဲ့ ကွန်ရက်တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာစေဖို့၊ ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ အများနှင့်ဆိုင်တဲ့ အရေးကိစ္စတွေမှာ အမျိုးသမီးတွေ အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝစွာ ပိုမိုပါဝင်လာနိုင်စေဖို့၊ ကျား၊ မ အခြေပြု အကြမ်းဖက်မှုတွေ ပပျောက်သွားစေဖို့၊ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့နဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုတွေအတွက် အဟန့်အတားတွေ ထိခိုက်နစ်နာမှုဖြစ်စေတဲ့ လူမှုဓလေ့ထုံးစံတွေနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာစံနှုန်းတွေကို ပပျောက်သွားစေဖို့ စတဲ့ကဏ္ဍများကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက်နေပါတယ်ရှင်။
ယခုနှစ် ၂၀၂၀ အစဦးပိုင်းကာလမှာဆိုရင်ဖြင့် အဖွဲ့ဝင်တွေ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ အမျိုးသမီးများအပေါ် နည်းမျိုးစုံမှ အကြမ်းဖက်မှုကို အကာအကွယ်ပေးနိုင်မဲ့ အများပြည်သူများ သိရှိပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက် ဥပဒေမူကြမ်းတစ်ရပ်ဟာ ထွက်ပေါ်လို့လာခဲ့ပါပြီရှင်။ နောင်တွင်လည်း ၎င်းဥပဒေကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာနဲ့ အမှန်တကယ်အမျိုးသမီးထုတစ်ရပ်လုံးကို အကာအကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ ဥပဒေအဖြစ် အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက် အားလုံးရဲ့ အင်အားများနဲ့ အတူတကွစုစည်းပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်...
သုံးရက်တာ အစီရင်ခံစာရေးသားနည်းသင်တန်းအား ဇန်နဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့မှ ၁၄ ရက်နေ့အထိ ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်ရုံးခန်း၌ CU ဝန်ထမ်းများအတွက် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ စွမ်းရည်ရှေ့ဆောင်မှ သင်တန်းဆရာများမှ သင်တန်းဖြစ်မြောက်စေရန် ပံ့ပိုးကူညီပေးခဲ့ပြီး သင်တန်းသားများသည် အစီရင်ခံစာရေးသားခြင်း၏ စိန်ခေါ်မှုများနှင့် အကျိုးရှိမှုများ၊ အစီရင်ခံစာတစ်စောင်အား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနည်း၊ ထိရောက်စွာရေးသားခြင်းနည်းလမ်းများ၊ စာရေးသားသူတစ်ဦး၏ တာဝန်များ၊ အစီရင်ခံစာရေးသားရာတွင် ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုအား မြှင့်တင်ခြင်း၊ အစီရင်ခံစာရေးသားခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၊ အချက်အလက်များစုဆောင်းခြင်းနည်းလမ်း၊ စုစည်းခြင်း၊ အချက်အလက်များအား တင်ပြခြင်း၊ အနှစ်ချုပ်ခြင်းနှင့် အစီရင်ခံစာရေးသားရာတွင် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုဆက်နွယ်မှုတို့အား လေ့လာသင်ယူခဲ့ကြပါသည်။ (LIFT)
ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်နှင့် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများကြား ဥရောပသမ္မဂ္ဂ မှ ပေးအပ်သော ရံပုံငွေ သဘောတူညီမှုစာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းအခမ်းအနားအား ဆူးလေရှန်ဂရီလာ ဟိုတယ်၌ ဇန်နဝါရီလ ၁၆ ရက်နေ့တွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အခမ်းအနားတွင် ရံပုံငွေ ပေးအပ်ချီးမြှင့်ရန် ရွေးချယ်ခံရသော ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း ၃ ဖွဲ့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း ၃ ဖွဲ့ နှင့် ရှမ်းပြည်နယ် အတွင်းရှိ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း ၄ ဖွဲ့၊ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း ၅ ဖွဲ့ စုစုပေါင်း အရပ်ဖက်လူမှု အဖွဲ့အစည်း ၁၅ ဖွဲ့ ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ (EU)
ဥရောပသမဂ္ဂ၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့် ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေး ကွန်ရက်နှင့် DCA NCA တို့ ပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှ မှုရှိရန်အတွက် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေးစီမံကိန်းမှ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှ ရေးလုပ်ငန်းများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးရေးအစီအစဉ်တစ်ခုပါဝင်လာပြီး အဆိုပြုလွှာအောင်မြင်သော အဖွဲ့အစည်းများအား ရံပုံငွေနှင့်ပတ်သတ်သော (ဝန်ထမ်းရေးရာ၊ ငွေကြေးစာရင်းများဆိုင်ရာ၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ထင်သာမြင်သာရှိစေရန် လိုဂိုများအသုံးပြုမှု၊ ဝယ်ခြမ်းရေးမူဝါဒနှင့် ရုံးတွင်းထိန်းသိမ်းခြင်း) ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ ရှင်းလင်းသေချာစွာသိရှိစေရန် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၇ နှင့် ၁၈ ရက်နေ့များတွင် ဆူးလေ ရှန်ဂရီလာဟိုတယ်၌ (၂) ရက်တာ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ယင်းဆွေးနွေးပွဲသို့ စီမံကိန်းဝင် တိုင်းနှင့် ပြည်နယ် လေးခုမှ ရှမ်းပြည်နယ်မှ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း (၄) ဖွဲ့၊ ကချင်ပြည်နယ်မှ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း (၅) ဖွဲ့မှ ကရင်ပြည်နယ်မှ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း (၃) ဖွဲ့ နှင့် မန္တလေးမှ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း (၃) ဖွဲ့ကိုယ်စားပြု ကိုယ်စားလှယ် (၂) ဦးစီ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ (EU)
၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်သည် ကျောက်ဖြူမြို့၊ ရမ္မာဝတီခန်းမတွင် ဂျဲန်ဒါနှင့် ဂျဲန်ဒါအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို တက်ရောက်သူ ၄၇ ဦး (ကျား ၂၅၊ မ ၂၂) တို့ဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ကျောက်ဖြူအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှုး ဦကျော်နုမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၏ ဒါရိုက်တာ ဒေါ်ယဉ်ယဉ်ပြုံးမှ အဖွင့်မိန့်ခွန်းပြောကြားပေးခဲ့ပါသည်။ သင်တန်းအား နှစ်ရက်ကြာကျောက်ဖြူမြို့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ဂျဲန်ဒါနှင့် ဂျဲန်ဒါအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ဗဟုသုတများ၊ NSPAW အားအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်နေမှု၏ တိုးတက်မှုအခြေအနေနှင့် မြို့နယ်အဆင့် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးကော်မတီ၏ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံတို့ကို မျှဝေရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ (IDRC, LIFT and Christian Aid)
ငြိမ်းချမ်းမေတ္တာအဖွဲ့၏တတိယအကြိမ်အကြံပြုဆွေးနွေးဝိုင်း - အမျိုးသမီးများ၏စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်း နှင့်ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု
ဘာသာပေါင်းစုံငြိမ်းချမ်းရေး (ငြိမ်းချမ်းမေတ္တာ) အဖွဲ့မှ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးထွန်းကားစေရန် အကြံပြုဆွေးနွေးဝိုင်းတစ်ရပ်အား နေပြည်တော်တွင် ၂၀၁၉ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၄ရက်နေ့မှ ၁၅ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းဆွေးနွေးဝိုင်းတွင် ကော်မရှင် (၆)ခုမှ ကဏ္ဍကြီး (၆)ရပ် အားသီးခြားခွဲခြား၍ ဆွေးနွေးတင်ပြမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ကဏ္ဍကြီး (၆) ရပ်မှာ ပညာရေး၊ လူမျိုးစုများနှင့် လူနည်းစုများအားလုံးအတွက် ညီမျှသောအခွင့်အရေးများနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများ၊ အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု၊ လူငယ်များ၏စွမ်း ဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် ပါဝင်ချိတ်ဆက်မှု၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိကိုယ်ပိုင်ဝိသေသလက္ခဏာ၊ မတူကွဲပြားမှုနှင့် ဘုံစိန်ခေါ်မှုများ၊ နှင့် လွတ်လပ်စွာယုံကြည်ကိုးကွယ်နိုင်မှု စသည့် ကဏ္ဍများခွဲ၍ ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုကဏ္ဍမှ တိုက်ပွဲရှောင်အမျိုးသမီးများအတွက် Rights of Protection, Health care awareness နှင့်ပတ်သက်သော အသိပညာပေးသင်တန်းများပို့ချပေးခြင်း၊ ပို့ချပေးမည့် သင်တန်းဆရာများအတွက် နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးနှင့် ဥပဒေများ၊ CEDAW & NSPAW ၊ အမျိုးသမီးများအားအကာအကွယ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေများ၊ ရပ်ရွာအတွင်း အကြမ်းဖက်မှုအပေါ်ကာကွယ်တား ဆီးရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ သင်တန်းဆရာလက်စွဲစာအုပ်များရေးသားထုတ်ဝေနိုင်ရန်နှင့် ဘာသာတူများအချင်းချင်းနှင့် ဘာသာမတူသူများအချင်းချင်း အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှု စကားဝိုင်းများ ကျင်းပပေးခြင်းတို့ကိုဆောက်ရွက်ရန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ငြိမ်းချမ်းမေတ္တာအဖွဲ့၏ ဘာသာပေါင်းစုံအမျိုးသမီးသမီးများကွန်ယက်မှ ရှေ့ဆက်လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ စီမံချက်များတွင် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန်ကြိုးစားသွားမည်ဖြစ်သည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက်နေ့တွင် GEN အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သော WaterAid Myanmar သည် Gender Resource Center တွင် WASH (Water, Sanitation and Hygiene) and Gender နှင့်ပတ်သတ်သည့် အစည်းအဝေးတစ်ခုအား နေ့တစ်ပိုင်းပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးအား အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကွန်ရက်များ၊ မသန်စွမ်းအဖွဲ့အစည်းများ၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့များ၊ လူငယ်ကွန်ရက်များနှင့် ခြောက်သွေ့သောဒေသများမှ လူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားပြုသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ လုပ်ငန်းအဖွဲ့အား WaterAid မှ စတင်ခြင်းဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရှိ WASH Sector တွင် အားလုံးပါဝင်လာစေရန်နှင့် ဂျဲန်ဒါကိစ္စရပ်များကို ဖော်ဆောင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ တက်ရောက်လာသူများသည် မတူညီသော ရည်မှန်းချက်အုပ်စုများအတွက် WASH ဝန်ဆောင်မှုများရရှိရန် ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့် အတားအဆီးများနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ၎င်းတို့၏ အတွေ့အကြုံများကို မျှဝေခဲ့ကြပြီး ယင်းအတားအဆီးများကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရန် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အဖြေများကို စဉ်းစားခဲ့ကြပါသည်။ နောက်တစ်ကြိမ်အစည်းအဝေးအား မေလတွင် ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး စိတ်ဝင်စားသော အဖွဲ့အစည်းများသည် WaterAid Myanmar အား 09 40044 3874 မှတစ်ဆင့် သတင်းအချက်လက်များအတွက် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်၏ ဒါရိုက်တာ ဒေါ်မေစပယ်ဖြူသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၆ ရက်နေ့ Green Hill Hotel တွင် Internews မှ စီစဉ်ပြုလုပ်ခဲ့သော အမျိုးသမီး၊ မီဒီယာနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွင် “Gender Inclusion for Lasting Peace” အမည်ရ မိန်ခွန်းအား ပြောကြားပေးခဲ့ပါသည်။ ၎င်းစကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲသည် ဒေသတွင်းနိုင်ငံများအကြား ငြိမ်းချမ်းရေးညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုဖြစ်စဉ်တွင် အမျိုးသမီးများ၏ အခန်းကဏ္ဍအား မြှင့်တင်သည့် အတွေ့အကြုံများနှင့် အမြင်များကို လေ့လာလဲလှယ်ကြရန် ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်၏ ဒါရိုက်တာ ဒေါ်မေစပယ်ဖြူသည် ဘီဘီစီမြန်မာပိုင်း၏ Friday Live အစီအစဉ်တွင် "လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်အသစ် အလုပ်ဖြစ်မလား" ‌ခေါင်းစဉ်အား ပါဝင်ဆွေးနွးခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲတွင် ဆွေးနွေးသူများသည် လူ့အခွင့်အရေးစည်းရုံးလှုံ့ဆော်သူများနှင့် ယခင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ၏ ရှုထောင့်မှ လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနှင့်ပတ်သတ်ပြီး ၎င်းတို့၏ မျှော်လင့်ချက်များကို ဖော်ပြခဲ့ကြပါသည်။ (LIFT)
ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်၏ ဒါရိုက်တာ ဒေါ်မေစပယ်ဖြူသည် Coalition for Religious Equality and Inclusive Development (CREID) မှ စီစဉ်ကျင်းပခဲ့သည့် Women’s Coalition Workshop အား တက်ရောက်ရန် ဖိတ်ကြားခြင်းခံရသည့် မြန်မာနိုင်ငံ၊ အီဂျစ်၊ ပါကစ္စတန်၊ အီရတ်နှင့် နိုင်ဂျီးရီးယားတို့မှ ဧည့်သည် (၁၁) ဦးတွင် ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲ၏ ဒုတိယနေ့တွင် ဆရာမသည် အင်ကြင်းမေဟိန္ဒူအမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ ဆရာမ ကက်သလင်းသိန်းနှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဖယ်ကျဉ်ခံထားရသော တိုင်းရင်းသားနှင့် ဘာသာ‌ရေး လူနည်းစုအမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တင်ပြခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲသည် ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီလ ၂၁ ရက်နေ့မှ ၂၄ ရက်နေ့အထိ လေးရက်တာကြာမြင့်ခဲ့ပြီး တက်ရောက်လာသူများသည် ၎င်းတို့နိုင်ငံ၏ ဂျဲန်ဒါနှင့် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ဖယ်ကျဉ်ထားမှုကြားရှိ ဆက်ဆံရေးကိစ္စရပ်များ၊ နိုင်ငံများအကြား ရွေးချယ်ဖော်ထုတ်ထားသည့်တူညီမှုများ၊ ပံ့ပိုးကူညီပေးသူများနှင့် မိတ်ဖက်များသတ်မှတ်ပြီးသည့် သုတေသနအစီအစဉ်များကို မျှဝေခဲ့ကြပါသည်။
ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်၏ ဒါရိုက်တာ ဒေါ်မေစပယ်ဖြူသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် IDS Seminar Series "Religious inequalities in development: What about us?" တွင် ဆွေးနွေးသူတစ်ဦးအနေဖြင့် ပါဝင်ခဲ့ကာ “မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနာဂတ်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူနည်းစုအမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေအား ဆန်းစစ်ခြင်းသည် ဘာ့ကြောင့်အရေးပါသလဲ?” ခေါင်းစဉ်အား အလေးထားတင်ပြခဲ့ပါသည်။ ၎င်းဆွေးနွေးပွဲသည် Women’s Coalition Workshop ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး University of Sussex ၏ Institute of Development Studies တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ (LIFT)
ကျား၊ မ ‌ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်၏ Advisor သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဂျဲန်ဒါတန်းတူညီမျှမှုနှင့် အမျိုးသမီးစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင့်မှုတို့အား ဆန်းစစ်ရန်နှင့် GEWE အဖွဲ့ဝင်များအတွက် လုပ်ဆောင်ချက်အစီအစဉ်အား ရေးဆွဲရန် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သော Gender Equality and Women Empowerment (GEWE) retreat အား တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ Retreat အား UN အဖွဲ့များ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက်အကူပြုပုဂ္ဂိုလ်များ၊ INGO များနှင့် NGO များမှ ကိုယ်စားလှယ် ၄၀ ခန့်တက်‌ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ တက်ရောက်ခဲ့သူများသည် ၂၀၂၀ တွင် ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ဆောင်ချက်များကို သဘောတူခဲ့ကြပါသည်။
ကျား၊ မ ‌ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်၏ Advisor သည် ကရင်ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီးနှင့် ပြည်နယ်လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော ကရင်ပြည်နယ် အမျိုးသမီးကော်မတီ အစည်းအဝေးအား ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးအား တက်ရောက်သူ ၁၅၀ ဦးရှိခဲ့ပြီး UN အဖွဲ့များ၊ INGO များ၊ NGO များနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွက် ပထမဆုံးအစည်းအဝေးဖြစ်ပြီး ကော်မတီ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဆန်းစစ်ရန်နှင့် ဒေသဆိုင်ရာအဆင့်အဖွဲ့အစည်းများအား ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်မည့် နည်းလမ်းများကို ရှာဖွေရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ (LIFT)
ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်၏ Advisor သည် IDRC နှင့် Centre for Economic and Social Development (CESD) တို့မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် "Roundtable Discussion on SDGs and Gender Equality: Prioritizing Actions for the Next Decade" အမည်ရစကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွင် ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ Advisor သည် ‌စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွင် ပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ Private Sector, Public Sector နှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ ပါဝင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ဂျဲန်ဒါနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ကိစ္စရပ်များအား ကိုင်တွင်ဖြေရှင်းရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် မည်သို့လုပ်ဆောင်နေကြောင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ‌ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်းအား ‌အကောင်အထည်ဖော်ရန် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အားထုတ်မှုတို့ကို အဓိကတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
ကျား၊ မ ‌ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်၏ Advisor သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၅ ရက်နေ့တွင် Oxfam မှပြုလုပ်ခဲ့သည့် "Delivering Shared Prosperity in Myanmar" စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွင် ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ ‌ဆွေးနွေးပွဲသည် ဆင်းရဲမွဲတေမှုနှင့် မညီမျှမှုတို့ကို ‌လျော့ချကာ ‌ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော၊ ကြွယ်ဝသော၊ သာတူညီမျှသော ဖွံ့ဖြိုးရေးပန်းတိုင်များ ရရှိရန် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် အလေးထားရမည့် အဓိကကိစ္စရပ်များကို ‌‌ဆွေး‌နွေးခဲ့ပါသည်။ ဓာတ်ပုံပြပွဲလည်း ပါဝင်ခဲ့ပြီး အစီရင်ခံစာအသစ် "Time to Care: Unpaid and underpaid care work and the global inequality crisis" ကိုလည်း အခမ်းအနားတွင် မိတ်ဆက်ဖြန့်ဝေခဲ့ပါသည်။
ကျား၊ မ ‌ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်၏ Advisor သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၈ မှ ၃၀ ရက်နေ့အထိ ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံမြို့တွင် ပြုလုပ်မည့် Workshop on Social Accountability and Governance" Refresher ဆွေးနွေးပွဲအား ပါဝင်တက်ရောက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးတွင် ပါဝင်နေသော ဂျဲန်ဒါရှုထောင့်အား ဆန်းစစ်ရန်နှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်များအနေဖြင့် ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ဂျဲန်ဒါအား ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုအား မြှင့်တင်ရာတွင် မည်သို့အထောက်အကူပြုနိုင်ကြောင်းတို့ကို ဆန်းစစ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ (EU)
PATHWAYS TO INFLUENCE: PROMOTING THE ROLE OF WOMEN'S TRANSFORMATIVE LEADERSHIP TO ACHIEVE THE SDGS IN ASIA AND THE PACIFIC BY THE UNITED NATIONS.
Main report: https://www.unescap.org/sites/default/files/publications/Pathways_influence_promoting_role_women_transformative_leadership_0.pdf
Interview summaries: https://www.unescap.org/sites/default/files/Life_Journeys_of_Transformative_Leaders_1.pdf